TOERANA VOATOKANA HANAOVANA NY VAKSINY FANEFITRA NY COVID-19 ETO AMIN’NY FARITRA ANALAMANGA - ewa.mg
TOERANA VOATOKANA HANAOVANA NY VAKSINY FANEFITRA NY COVID-19 ETO AMIN’NY FARITRA ANALAMANGA
News - Santé - TOERANA VOATOKANA HANAOVANA NY VAKSINY FANEFITRA NY COVID-19 ETO AMIN’NY FARITRA ANALAMANGA
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « TOERANA VOATOKANA HANAOVANA NY VAKSINY FANEFITRA NY COVID-19 ETO AMIN’NY FARITRA ANALAMANGA » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
L’article TOERANA VOATOKANA HANAOVANA NY VAKSINY FANEFITRA NY COVID-19 ETO AMIN’NY FARITRA ANALAMANGA a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Afaka ny ahiahin’ny mpitia baolina kitra rehetra, fa hotanterahina ny volana aogositra, ho avy izao, ny fifidianana izay ho filohan’ny federasiona (FMF). Nisokatra nanomboka omaly ny filatsahan-kofidina. Tapaka nandritra ny fivoriambe tsy ara-potoana faharoan’ny “comité de normalisation”, natao tetsy amin’ny Carlton Anosy, omaly, fa hotanterahina ny asabotsy 24 aogositra ho avy izao, ny fifidianana izay ho filohan’ny federasiona malagasin’ny kitra (FMF). Lany ary neken’ireo filohan’ny ligim-paritra ny nametrahana fehezan-dalana manokana, hitondrana ny fifidianana. Nambaran’i Atallah Béatrice, filohan’ny “comité de normalisation” fa tsy nanova ireo rijanteny sy ny sata, tao anaty lalam-pifidianana, ny mpivory. Miandry ny fankatoavan’ny federasiona iraisam-pirenena, sisa.Nisokatra nanomboka omaly 12 jona, araka izany ny fandrotsahana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina, ho an’ireo kandidà, izay hifarana ny 12 jolay, amin’ny 5 ora hariva. Mila ny fankatoavan’ireo ligy telo ny kandidà, ho filohan’ny federasiona raha roa kosa ny an’ny komity mpitantana. Ny 1 aogositra, no hanambarana ny anaran’ireo kandidà rehetra ary ny ampitson’io, ny antsapaka ho an’ny filaharana ao anaty biletà tokana. Ny 8 – 22 aogositra, ny fampielezan-kevitra ary ny 24 aogositra ny fifidianana, izay tsy mbola voafaritra ny toerana, hanatanterahana, azy. Hivoaka, ny 1 septambra, ny vokatra ofisialy ary ny 2 septambra, ny famindram-pahefana eo amin’ny “comité de normalisation” sy ny filohan’ny FMF, vaovao. Mialoha izany, hotontosaina, rahampitso zoma 14 jona, ny fifidianana izay ho filohan’ny seksiona Tsiroanomandidy, ary ny 10 jolaly ny an’ny ligin’i Bongolava. Torcelin L’article Filohan’ny federasiona baolina Kitra: hatao ny 24 aogositra ny fifidianana a été récupéré chez Newsmada.
MARC RAVALOMANANA: Nisintona ny fitoriany
Ho fikatsahana ny tombontsoam-pirenena, nanapa-kevitra ny kandida Marc Ravalomanana ny hisintona ny fitoriana momba ny tsy fahatomombanana tamin’ny fifidianana 7 novambra 2018. Fitoriana miisa 208 no naterin’ny solontenan’ny kandida laharana faha-25 teny amin’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana (HCC) omaly 20 novambra 2018. Nanatitra ny taratasy fisintonana izany indray ny solontenan’ny kandida androany 21 novambra 2018. Mankasitraka ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) ny kandida Marc Ravalomanana. Nilaza ny solontenan’ny kandida, Hasina Andriamadison fa nanatri-maso sy nijanona 24 ora teny amin’ny CENI Alarobia tamin’ny fanarahana maso ny fikirakirana ny valim-pifidianana. Manoloana izany, “manaiky ny kandida Ravalomanana fa nanaja ny fangaraharana ny CENI”, araka ny tatitra nataon’ny tale fampielezan-kevitrany, Tsehenoarisoa Rabenja teny amin’ny QG Antsakaviro androany maraina. Nambaran’i Tsehenoarisoa Rabenja fa misy amin’ireo manao fihetsiketsehana ny mitady hanafoanana ny fifidianana filohampirenena. Ho fisorohana ny korontana, naniraka ny mpahay lalàna ny kandida laharana faha-25. “Tsy mankasitraka izany fanafoanana ny fifidianana tamin’ny 7 novambra 2018 ny kandida fa aleo handeha ny fihodinana faharoa hampazava ny safidim-bahoaka”, hoy hatrany izy. Ho tombontsoam-pirenena tokoa ve izany ny fanapahan-kevitry ny kandida Marc Ravalomanana ka na dia nahita tsy fietezana maro tamin’iny fifidianana iny aza dia nosintonina indray ireo fitoriana? Lynda A. Cet article MARC RAVALOMANANA: Nisintona ny fitoriany est apparu en premier sur déliremadagascar.
Ady amin’ny Coronavirus: “Tsy mihoatra ny 10 ny tranga amin’ny faritra efatra arahi-maso”
“Mahomby ny paikady noraisin’ny fanjakana iadiana amin’ny valanaretina Coronavirus ary efa voafehy izany”, hoy ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, profesora Rakotovao Jean Louis, omaly, teny Ambohidahy.Tsapa fa niakatra ny isan’ny olona nitondra ny tsimokaretina, nanomboka ny 24 desambra ka hatramin’ny 4 janoary lasa teo fa tsy mihoatra ny 10 amin’ny faritra efatra. Efa narahi-maso hatrany koa ireo faritra ireo ary nampiharina ny “opération coup de poing”. Ao anatin’ny fotoana ifampiarahabana noho ny taona vaovao izao ny isam-pianakaviana satria izay ny fomba ka manahy ny mety hiakaran’ny taha indray rehefa mifampikasokasoka ny rehetra. Tsy tokony hivarahontsana anefa ny rehetra manoloana izany.Tsy hisy fiverenana amin’ny fihibohana intsony ary tsy heverina hiakatra be ny isan’ny olona mitondra ny tsimokaretina Covid-19 eto amintsika, araka ny fanazavan’ny talen’ny andrimaso ara-pahasalamana sy fanaraha-maso ny valanaretina, ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, Andriamatana Vololoniaina Manuella, omaly, teny Mahamasina. Efa manana ny hery fiarovana amin’ny Coronavirus ny Malagasy ka mahatohitra ny tsimokaretina, miova isaky ny faritra ny taha ka 40% izany eto Analamanga ary 30% any amin’ny faritra Diana. Raha latsaka ambany ny taha, ilaina ny manara-maso ny tranga mihiba rehetra sy ny olona nifanerasera taminy rehetra. Mitohy hatrany koa ny fanaovana fitiliana. Hatramin’izao, tsy mbola nahitana ilay souche mutante amin’ny Covid-19 izay mamely any Royaume -Unis eto amintsika. Ho fisorohana ny fidiran’ity sokajy vaovao ity eto Madagasikara, manao fitiliana PCR avokoa ny olona miditra ny seranam-piaramanidina.Momba ny olona voatily fa marary, eny amin’ny tobim-pahasalamana no manaraka fitsaboana fa tsy mahazo mijanona any an-trano. Eto Antananarivo, misokatra ny toeram-pandraisana Anosiala, HJRA sy HJRB ary ny hopitaly Manara-penitra mandray ireo mila fitsaboana.Zava-dehibe koa ny fitazonana ny fepetra fiarovana rehetra : fanasana tanana amin’ny rano sy savony na fampiasana gel disinfectant, fitondrana saron-tava isaky ny mivoaka ny trano ary fanajana ny elanelana iray metatra amin’ny zavatra rehetra atao. Mbola maha voasazy rahateo ny tsy fanarahana ny fepetra satria manara-maso ny mpitandro filaminana.Vonjy A.L’article Ady amin’ny Coronavirus: “Tsy mihoatra ny 10 ny tranga amin’ny faritra efatra arahi-maso” a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny asan-jiolahy…: nahazo basy sy bala avy amin’ny Tafika Malagasy ny polisy
Notanterahina omaly teny amin’ny direction interarmées de la logistique et de soutien ny lanonana ara-miaramila teo amin’ny Tafika Malagasy ny ny polisim-pirenena. Nisy ny fanolorana ireo basy lava mi­isa 500 MAS 36 sy MAT 49 miisa 50 ary bala miisa 20 000 amin’ny 7.5 mn ary 6 000 amin’ny 9 mm. Nanolotra izany teny an-toerana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), ny Jly Rakotonirina Richard niaraka tamin’ny Seg, ny Jly Ravalomanana Ri­chard, niaraka tamin’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka (MSP). Nambaran’ny MDN fa ireto fitaovana ireo dia tohana lehibe hiadian’ny polisim-pirenena amin’ny asan-jiolahy any amin’ireo faritra mena manerana ny Nosy mba hanatanterahana ny vina napetraky ny filoha Rajoelina. Marihina fa sambany teo amin’ny tantara no nisian’ny fanoloran’ny Tafika fitaovam-piadiana ho an’ny polisim-pirenena. Mampiseho izany fa iray ny fahavalo iadiana ary mampiseho ny firahalahiana eo amin’ny mpitandro filaminana izao. Samy resy lahatra ireto tomponandraikitra misahana ny fitandroana ny filaminana ireto fa iray ny tanjona amin’ny famerenana ny fandriampahalemana. Namba­ran’ny MDN fa tsy miandry ny any ivelany foana fa afaka mifanampy koa ny samy mpitandro filaminana eto an-toerana mba hisian’ny fampandrosoana maharitra. Natao izao mba ho fanohizana ny famerenana ny fandriampahalemana eto Madagasikara.Jean ClaudeL’article Ady amin’ny asan-jiolahy…: nahazo basy sy bala avy amin’ny Tafika Malagasy ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Akaiky fetim-pirenena: mirongatra ny tsy fandriampahelamana ao Toamasina
Vatana mangatsiakana raim-pianakavina iray sahabo ho 50 taona indray hita faty tetsy amin’ny tetezana mainty Tanambao verrerie ny marain’ny alatsinainy teo. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana izy, porofon’izany ireo fanjaitra tsy latsaky ny folo tao am-bavany sy teo amin’ny lelany. “Mangana ny tendany ary loaka ihany koa ny lohany”, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovoao ao an-toerana. Faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana io tetezana mainty io noho izy lasa toerana fieren’ny jiolahy. “Araka izany, tombanan’ny fokonolona eo an-toerana fa efa maty tany an-kafa ilay raim-pianakaviana ary nariana sy natsipy teo amin’io tetezana mainty io”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.Ankoatra izay, renim-pianakaviana iray mampiasa “cash point” ao Toamasina ihany koa lasibatry ny asan-jiolahy ny asabotsy teo. Nambanan’ireo jiolahy basy izy tamin’izany ka lasan’ireo olon-dratsy ny poketra nisy vola mitentina 40 tapitrisa Ar sy ny finday. Sajo sy Henintsoa HaniL’article Akaiky fetim-pirenena: mirongatra ny tsy fandriampahelamana ao Toamasina a été récupéré chez Newsmada.